खोजी/अनुसन्धान – Page 50 – JanaSanchar.com
“नेपालको सत्ता र विद्रोहको राजनीतिमा भारतले दोहोरो चरित्र देखाए”-विप्लव
नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले भारतले नेपालको सत्ता र विद्रोहको राजनीतिमा दोहरो चरित्र देखाएर अनौंठो चाल चालिराखेको आरोप लगाएको छ । ‘सत्तामा पनि आफैं, विद्रोहमा पनि आफैंको अनौठो चाल भारतले चालिहरको छ’ अगामि फागुनमा हुने पार्टीको ८ औं महाधिवेशनको लागि तयारको ९६ पृष्ठ लामो ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’मा भनिएको छ, ‘ विगतमा..
नेपाल बिखण्डन गर्न पटनामा बैठक भएको पुष्टि, सजगता अपनाउँदै नेपाली सेना
नेपालको बिखण्डनका लागि देशभित्र र छिमेकी देश भारतमा विभिन्न तयारी भइरहेका बेला नेपाली सेनाको नेतृत्वले त्यसबारे सचेतता अपनाउन थालेको छ । बिखण्डनकारी अभियानलाई तिब्रता दिन सशस्त्र गतिविधिको समेत तयारी गरेको सूचना पाएपछि सैनिक नेतृत्वले सजगता अपनाएको हो । स्रोतका अनुसार देशको सुरक्षामा खलल पुग्ने गम्भीर सूचना पाएपछि प्रधानसेनापति..
उपभोक्ताहरु ठग्दै राजधानीका यी असुरक्षित अपार्टमेन्टहरु
गत वर्ष १२ वैशाख २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पका बेला देशमा धेरै ठूलो क्षति पुग्यो । बनेका धेरै आधुनिक भवनहरु चर्किए । धेरै मानिसको घर ढलेर जमिनमा भासियो । ठूल ठूला अपार्टमेन्टमा बस्ने संस्कृतिको विकास हुँदै थियो तर ती अपार्टमेन्टहरु यसरी चर्कियो कि बस्नै नहुने भएको छ । अपार्टमेन्टको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुले जेनतेन टालटुल..
छापामार शैलीमा छानिए ८० न्यायाधीश, मन्त्रीज्यूका भतिजादेखि फुपूका छोरासम्म, साला-भिनाजु नै न्यायाधीश नियुक्त !
राजनीतिक दलका नेताहरुले अधिकांश निर्णयहरु मध्यरातमा अपारदर्शी ढंगबाट गर्ने गरेका छन् । यसैको सिको गर्दै न्यायपरिषदले विहीबार मध्यराति छापामार शैलीमा ८० न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्‍यो । नवनियुक्त न्यायाधीशमा नेताहरुका आफन्त र नातेदारले समेत प्राथमिकता पाएका छन् । लोकतन्त्रले विधिको शासन एवं पारदर्शिताको माग गर्छ । एमाले अध्यक्ष..
दुई प्रेमी ५० प्रेमिका ! पोखराका ३० ठगिए
झापा शनिअर्जुन घर भएका नेत्रप्रसाद गिरीले ५० भन्दा धेरै युवतीलाई प्रेमिका बनाएर ठगी गरिसकेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनले रविन केसी भन्ने पाँचथर फैलचाका रविनकुमार चिमोरियासँग मिलेर प्रेमिका बनाएर ठगी धन्दा चलाउँदै आएका थिए । सिआइबीले गत ८ पुसमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ । म्याग्दीकी इन्दु शर्माका श्रीमान्को दुबईमा मृत्यु भयो ।..
सानालाई कारबाही देखाएर ठूलालाई उन्मुक्ति दिन चलखेल
विमानस्थलबाट सुन तस्करी काण्डमा साना कर्मचारीलाई कारबाही गरेको देखाएर मुख्यलाई उन्मुक्ति दिने चलखेल सुरु भएको छ। भन्सार विभाग र विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान भन्दै २९ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ। यस्तै विभागले एकजना उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। हवाई तथा स्थल मार्ग भएर नेपाल भित्रने..
सिपी गजुरेलको जग्गा मातृकाले किन कब्जा गरे ?
नेपालको वाम–राजनीतिमा सुनिइरहने नामभित्रै पर्छन् सिपी गजुरेल र हरिबोल गजुरेल । एकै पृष्ठभूमि र एउटै कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका दुवै नेता अहिले फरक माओवादीमा छन् । उद्देश्य एकै छ, तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने राजनीतिक कार्यदिशाको अन्तरका कारण यी दुई विपरीत धारबाट अगाडि बढेका छन् । अर्थात्, सिपी मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको..
घुसबाट चल्छन् प्रहरीका गाडी
काठमाडौं, १६ पुस । तीन महिनाअघि महानगरीय प्रभाग इमाडोलका प्रहरीले घुस मागेको भन्दै प्रहरी मुख्यालयमा उजुरी प¥यो। प्रभागका प्रमुख इन्स्पेक्टर बोधराज रेग्मीलगायतका प्रहरीमाथि छानबिन गर्दा गाँजासहित पक्राउ परेका स्थानीय युवकसँग प्रभागका प्रहरीले आफ्नो गाडीका इन्धन खर्च भन्दै पैसा मागेको खुल्यो। प्रभागका लागि संगठनले गाडी दिए पनि..